प्रविधि र फेसनको सम्मिश्रण भिभो भी- १९ बुधवार, असार २४, २०७७
क्लियर टिभीमा अनलाइन कक्षा शुरु बिहिवार, असार ४, २०७७
मोबाइलफोन ह्वावे वाई सेभेन पी सार्वजनिक बिहिवार, चैत्र ६, २०७६
नेपालगन्जमा भायनेटको इन्टरनेट सेवा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेट कम्युनिकेशन प्राइभेट लिमिटेडले २७ औं शाखाको रुपमा नेपालगन्जमा आफ्नो शाखाको उद्घाटन गरेको छ । सोमवार, फाल्गुन १९, २०७६
बाँकेमा भोलीदेखि ‘क्यान इन्फोटेक’ मेला प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशमा नोबेल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम देखिएको छ । प्रदेशमा यस्तो जोखिम देखिएसँगै सरकारले लगानी सम्मेलन लगायतका विविध कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार, फाल्गुन १९, २०७६
नेपालगन्जमा एजुकेशन फेयर नेपालगन्जमा ‘स्टडी इन नेपाल एजुकेसन फेयर २०२०’ को आयोजना हुने भएको छ । बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६
विज्ञान नीति तहगतरुपमै अविलम्वन गर्नुपर्छ: मन्त्री रावल समग्र राष्ट्रको उन्नतीका लागि विज्ञान नीति तहगतरुपमै अविलम्वन गरिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले बताएकाछन् । मगलवार, माघ २१, २०७६
इन्जिनियरलाई व्रिज डिजाइन सम्बन्धि नयाँ कोड अनुशिक्षण तीन वटा प्रदेशका इन्जिनियरलाई कंक्रिट ब्रिज डिजाईन अन्तरगत लिमिट स्टेट मेथडको बारेमा नेपालगन्जमा अनुशिक्षण दिइएको छ। मगलवार, माघ १४, २०७६
नेपालगन्जमा चर्जिङ स्टेसन स्थापनाको योजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पश्चिम नेपालको मुख्य शहर नेपालगन्जमा चर्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । मुख्य शहर र राजमार्गका विभिन्न स्थानमा ५० चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अभियान अन्तर्गत प्राधिकरणले नेपालगन्जमा पनि स्टेशन स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि ग्लोबल बोलपत्र (टेण्डर) निकालेको छ । शनिवार, माघ ११, २०७६
बिज्ञान तथा प्रविधि महोत्सवको तयारी नेपालगन्जमा विज्ञान तथा प्रबिधिको बृहत प्रर्दशनी एवं महोत्सवको आयोजना हुने भएकोछ । आगामी फाल्गुन ८ देखि १० गते सम्म कारकाँदो स्थित सडक डिभिजनको परिसरमा उक्त प्रर्दशनी तथा महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो । शनिवार, माघ ४, २०७६
नेपाली स्याट–१ ले लियो तीन मुलुकको तस्बिर नेपालले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ ले भुटान, बङ्गलादेशको ढाका तथा भारतका आसाम, दार्जि्लिङ र सिक्किमका भूभागको तस्बिर लिएको छ । सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
साईबार क्राइमबारे सचेतना कार्यक्रम किशोरी तथा बालबालिकालाई सचेत गराउने उद्देश्यले विभिन्न वडामा साईवर क्राइम सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरिएको छ । बिहिवार, मंसिर २६, २०७६
नेपाल टेलिकमको रारामा फोरजी सेवा नेपाल टेलिकमले रारामा फोरजी सेवा सुरु गरेको छ । नेपालकै सबैन्दा ठूलो ताल तथा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रुपमा रहेको रारामा नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको हो । शनिवार, मंसिर २१, २०७६
यस्तो छ सुबिसुको दशैं अफर सुबिसु केबलनेट (प्रा.) लिले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंलाई मध्यनजर गर्दै मात्र रु. ९९ मा इन्टरनेट वा क्लियर टिभि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । आइतवार, भदौ २९, २०७६
क्यानको अध्यक्षमा शर्मा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ बाँकेको अध्यक्षमा रमणी प्रसाद शर्मा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न भएको ११ औं साधारणसभाले शर्मालाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । आइतवार, भदौ ८, २०७६
नेपालगन्ज ईलेक्ट्रिक्सको अध्यक्षमा शिवराज नेपालगन्ज ईलेक्ट्रिक्स एशोसियसन बाँकेको अध्यक्षमा शिवराज रिजाल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न भएको पाचौं वार्षिक साधरण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनले रिजाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । आइतवार, भदौ ८, २०७६
कारकाँदो उज्याले बनाउँदै वडाअध्यक्ष बर्मा आइतवार, असार २१, २०७७ 672